Beesha Caalamka oo sheegtay in ay waajib tahay qabashada Doorasho toos ah oo Dadku codka leeyihiin.
July 24, 2020 NEWS 2
MUQDISHO(P-TIMES) – Beesha Caalamka ayaa soo dhaweysay wada hadaladii ka dhacay magalada Dhuusa-Marreeb ee ay iskaga yimaadeen madaxda dawladda Faderaalka Soomaaliya & Dawlad gobaleedyada, waxaana ay sheegen in ay soo dhaweynayan.
“Saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka* waxay rajeynayaan in kulankii muhimka ahaa ee ay madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) iyo Dowlad Xubnaha ka ah Federaalka (DXF) ku yeesheen magaalada Dhuusamareeb uu yahay dib u billaabashadii aadka looga dhursugayay ee wadashaqeyn wax ku ool ah oo dhexmarta madaxda DFS iyo Dawladdaha Xubnaha ka ah” ayaa lagu yiri qoraalkan.
Saaxiibada Soomaaliya ayaa soo dhaweeyey magacaabida guddiga doorashada ee ka shaqeynaya hababka iyo hanaanka doorashooyinka Qaran ee dhacaya dhammaadka sannadkan, waxaana guddiga lagu booriyey dadajinta howlaha loo xilsaaray.
“Saaxiibadu waxay soo dhoweynayaan go’aanka ay madaxdu ku gaartay inay magacaabaan guddi farsamo oo ka soo shaqeeya hababka/hanaanka doorasho ee doorashooyinka qaran ee 2020. Marka uu guddigu hore u gudagalo hawshiisa, waxaa lagama maarmaan noqon doonta in la helo heshiis ballaaran oo dhexmara saamilleyda Soomaaliyeed”
Qoraalka waxaa lagu sheegay in lagama maarmaan ay tahay in laga gudbo hanaanka soo xulida baarlamaanka, loona gudbo doorasho toos ah, sida uu dhigayo Dastuurka Soomaaliya.
“Saaxiibadu waxay mar kale ku celinayaan inay lagama maarmaan tahay in geeddi socodka doorashadu uu dalka ka saaro hanaanka soo xulidda, kuna hago waddo lagu gaaro doorashooin toos ah, sida uu xeerinayo Dastuurka Federaalka Ku Meelgaarka ah. Sidaa darteed, saaxiibada beesha caalamku waxay ugu baaqayaan dhammaan saamilleyda Soomaaliyeed inay si degdeg ah u sii wadaan dadaalladooda si loo gaaro ujeeddooyinkan, dalkana lagu hayo wadiiqo siyaasadeed oo xasilloon, oo ay ku jirto danta dadka Soomaaliyeed” ayaa lagu yiri qoraalkan.
Sidaas oo kale hanaanka doorashada ka dib, waxaa lagu dhiirigaliyey Hoggaamiyayaashu in ay heshiis ka gaaraan hanaanka dibu habeynta dimuquraadiyadda ee Soomaaliya, lana dadajiyo Dastuurka,Xisbiyada, iyo arrimaha hortabinta leh si loo helo wax-wanaagsan.
“Hanaanka doorashada ka sokow, saaxiibada beesha caalamku waxay sidoo kale madaxda Soomaaliyeed ku boorrinayaan inay ku heshiiyaan qorshe lagu hirgeliyo dhinacyada kale ee dib u habaynta dimuqraadiyadeed ee Soomaaliya, oo ay ka mid yihiin Dib u eegidda Dastuurka, yagleelidda dimuqraadiyad xisbiyo badan leh iyo abuuridda Guddiga Adeegga Garsoorka oo shaqeeya, Guddiga Xuquuqul Insaanka, iyo Maxkamadda Dastuuriga” ayaa lagu yiri qoraalkan.
Beesha Caalamka ayaa sheegtay in loo baahan yahay in ay xoriyad madax banaani iyo hadalba helaan dhammaan Musharaxiinta, Xisbiyada, Haweenka, Dhalinyaradda, Warbaahinta iyo dhammaan qeybaha bulshada.
“Waxay sidoo kale hoosta ka xarriiqayaan baahida loo qabo in la xaqiijyo in murashaxiinta, xisbiyada, haweenka, dhallinyarada, beelaha laga tirada badan yahay iyo warbaahinta dalkoo dhan ay u hadli karaan si xor ah, gaar ahaan inta lagu gudajiro xilliga doorashada”ayaa lagu yiri qoraalkan.
Qoraalka waxaa wadajir u soo saaray Belgium, Boqortooyada Midowday ee Ingiriiska, Canada, Denmark, Dowladda Mareykanka, Faransiiska, Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM), Ireland, Itoobiya, Jabuuti, Japan, Jarmalka, Kenya, Midowga Yurub, Masar, Netherlands, Norway, Sweden, Talyaaniga, Turkiga, Uganda, Urur-Goboleedka (IGAD), iyo Qaramada Midoobay.
Kuwaa waxsoo qoray ma aha saxibada somaliya
Hambalyo Puntland. Goodax Barre, Imtixaanka uu la qarqarayo ha ka qaado reer Baraawe!!!